Elihu kae sɛ Onyankopɔn bu atɛntrenee, na n’akwan teɛ (1-37)
Hiob kae sɛ Onyankopɔn abu no atɛnkyea (5)
Nokware Nyankopɔn no rentumi nyɛ bɔne da (10)
Hiob nni nimdeɛ (35)
34 Ɛnna Elihu toaa so kae sɛ: 2 “Muntie me nsɛm, mo a munim nyansa;Muntie me, mo a mowɔ nimdeɛ pii. 3 Efisɛ aso na ɛsɔ nsɛm hwɛ,Sɛnea tɛkrɛma* ka aduan hwɛ no. 4 Momma yɛn ankasa nhwehwɛ mu nhu nea ɛteɛ;Momma yɛn ara yɛnkyerɛ nea eye ma yɛn. 5 Efisɛ Hiob aka sɛ, ‘M’asɛm yɛ dɛ,+Nanso Onyankopɔn ne me anni no yiye.+ 6 Mohwɛ a, medi atoro sɛnea ɛbɛyɛ a wɔremfa atemmu a ɛfata mma me anaa? Mentoo mmara biara, nanso me kuru nni aduru.’+ 7 Ɔbarima bɛn na ɔte sɛ HiobA ɔnom animtiaabu sɛ nsu? 8 Ɔne abɔnefo reyɛ ayɛ pɛ,Na ɔne amumɔyɛfo reyɛ afa ɔkwan baako so.+ 9 Efisɛ waka sɛ, ‘Sɛ ɔbarima bɔ mmɔden sɛ ɔbɛyɛ nea ɛsɔ Onyankopɔn ani a,+Ɔrennya mfaso biara.’ 10 Enti mo a mowɔ ntease,* muntie m’asɛm yi: Ɛrentumi mma da sɛ nokware Nyankopɔn no bɛyɛ bɔne!+Na ɛrentumi mma da sɛ ade nyinaa so Tumfo no bɛyɛ adebɔne!+ 11 Nea onipa yɛ no, ɛno na ɔhwɛ ho tua no ka,+Na sɛnea onipa akwan te no, ɛho nsunsuanso na ɔde ba no so. 12 Ampa, Onyankopɔn nyɛ bɔne,+Na ade nyinaa so Tumfo no mmu atɛnkyea.+ 13 Hena na ɔde wiase hyɛɛ ne nsa?Na hena na ɔde wiase* nyinaa maa no sɛ ɔnhwɛ so? 14 Sɛ ɔde n’ani* si nnipa so,Na ɔboaboa wɔn honhom ne wɔn ahome ano ba ne nkyɛn a,+ 15 Nnipa* nyinaa bɛsɛe,Na adasamma bɛsan akɔ dɔte mu.+ 16 Enti sɛ wowɔ ntease a, tie eyi;Yɛ aso tie nea mereka yi. 17 Nea okyi atɛntrenee na ɛsɛ sɛ odi tumi anaa?Anaa otumfo a ɔteɛ no, wubebu no fɔ? 18 Wubetumi aka akyerɛ ɔhene sɛ, ‘Woyɛ onipahunu’? Anaa wobɛka akyerɛ atitiriw sɛ, ‘Moyɛ abɔnefo’?+ 19 Obi wɔ hɔ a ɔnhwɛ abirɛmpɔn anim nsen nnipa foforo,Na ommu osikani nsen ohiani,*+Efisɛ wɔn nyinaa yɛ ne nsa ano adwuma.+ 20 Wotumi wu prɛko pɛ,+ anadwo dasum;+Wɔwosow biribiribiri, na wowu;Atumfo mpo, woyi wɔn fi hɔ, nanso ɛnyɛ nnipa nsa na ɛyɛ.+ 21 Efisɛ Onyankopɔn ani tua onipa akwan,+Na Ohu anammɔn a otu biara. 22 Esum anaa esum kabii biara nni hɔA abɔnefo betumi de wɔn ho akosie mu.+ 23 Efisɛ Onyankopɔn nhyɛɛ bere mmaa onipa biaraSɛ ɔmmra n’anim mma ommu no atɛn. 24 Obubu atumfo, na enhia sɛ ɔhwehwɛ wɔn asɛm mu ansa;Na ɔde nnipa foforo si wɔn anan.+ 25 Efisɛ onim nea wɔreyɛ,+Na otu wɔn ade so anadwo, na wobubu.+ 26 Wɔn bɔne nti, ɔbobɔ wɔnWɔ baabi a obiara behu,+ 27 Efisɛ wɔagyae n’akyi di,+Na wɔmfa n’akwan nyɛ hwee;+ 28 Wɔma ohiani su frɛ no,Na ɛma ɔte mmɔborɔwa nteɛm.+ 29 Sɛ Onyankopɔn yɛ komm a, hena na obetumi abu no fɔ? Sɛ ɔde n’anim sie a, hena na obetumi ahu no? Sɛ ɔde n’anim sie ɔman oo, sɛ ɔde sie onipa oo, ekosi hɔ ara. 30 Ɛremma onipabɔnefo* nni tumi,+Na ɛremma onipabɔnefo nsum nkurɔfo afiri. 31 Wohwɛ a, obi betumi aka akyerɛ Onyankopɔn sɛ,‘Menyɛɛ bɔne biara, nanso wɔatwe m’aso’?+ 32 Wohwɛ a, obi betumi aka sɛ, ‘Sɛ mayɛ biribi a minnim a, kyerɛ me;Sɛ mayɛ bɔne bi a, merenyɛ bio’? 33 Wopɛ sɛ ɔma wo akatua a wopɛ, bere a woapo n’atemmu? Wo ara na wobɛkyerɛ, na ɛnyɛ me. Enti nea wunim no yiye no, ka kyerɛ me. 34 Nnipa a wɔwɔ ntease*Ne ɔbarima nyansafo biara a ɔretie me no bɛka akyerɛ me sɛ, 35 ‘Ɛnyɛ nimdeɛ mu na Hiob kasa,+Na ɛnyɛ nhumu na ɔde kasa.’ 36 Ma wɔnsɔ Hiob nhwɛ* nkosi ase,Efisɛ ne nsɛm a ɔka no te sɛ nnipabɔnefo de! 37 Ɔde atuatew ka ne bɔne ho;+Ɔbɔ ne nsam kyerɛ yɛn de di yɛn ho fɛw,Na ɔka nsɛm pii tia nokware Nyankopɔn no!”+
^ Anaa “asaase.”
^ Nt., “ne koma.”
^ Anaa “ommu otitiriw nsen mmɔborɔwa.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “M’agya, ma wɔnsɔ Hiob nhwɛ.”